Turkiga oo mashaariic u balan qaaday Dalka Jabuuti - Wargane News
Home Somali News Turkiga oo mashaariic u balan qaaday Dalka Jabuuti
Madaxweynaha Dalka Turkiga Racep Tayyib Erdogan oo booqasho ku jooga dalka Jabuuti ayaa kulan la qaatay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele, waxaana uu Turkigu balan qaaday mashaariic dalkaas laga fulinayo.
Kulanka labada madaxweyne ayaa looga hadlay sidii Turkiga iyo Jabuuti iskaga wada shaqayn lahaayeen arrimaha ganacsiga, xoojinta xiriirka labada dowladood iyo la dagaalanka Burcad badeedka iyo Argagixisada.
Dowladda Turkiga waxay Jabuuti u balan qaaday in mashaariic lagu hormarinayo waxbarashada, Caafimaadka iyo mashaariic la xiriira hormarka dalka isagoo cadeeyey in dowlada Jabuuti uu la qonayo saaxiib dhow.
Ugu dambayn heshiiska iyo wadahalka labada madaxweyne ayey ka soo saareen heshiis lagu cadenayo kulankooda iyo balan qaadka Turkiga waxaana ukala saxiixay wasirada arrimaha dibada Dalalka Jabuuti iyo Turkiga.
Dhinaca kale maanta ayaa la filayaa in wafdiga madaxweynaha Turkiga ay soo gaaraan magaalada Muqdisho oo Jimcihii lagu balan sanaa in ay soo gaaraan walow uu dib u dhacay safarka madaxweyne Erdogan ka dib geeridii boqorka Sacuudiga.
Somaliland: Madaxweyne Ku Xigeenka Iyo Xubno Wasiiro Ah Oo Berbera Gaadhey iyo Odoyaasha Ehelka Marxuumka Oo Go,aan Salmi ah Qaatey